Fantaro Ilay Mpiady Sady Mpanoratra Sady Pretra Lian-drà Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Fantaro Ilay Mpiady Sady Mpanoratra Sady Pretra Lian-drà Ao Rosia
Voadika ny 07 Avrily 2017 5:52 GMT
Tsy mpanoratra maoderina malaza ao Rosia ihany i Zakhar Prilepin fa ideology politika manam-peo ihany koa. Nanao fandaharana resadresaka tao amin'ny Tsargrad TV tambajotra fahitalavitra nasionalista mpandala ny mahazatra tafahoatra izy amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Antoko Bolshevika Nasionaly azy. Lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny Svobodnaya Pressa izay sehatra fampitam-baovao iray hafa mpomba ny Kremlin ary mifantoka amin'ny politika sy ny miaramila ary ny toe-karena ihany koa i Prilepin , .
Tamin'ny 13 Martsa, niseho tao amin'ny lahatsary mahavariana an-tserasera iray i Prilepin .
Io no volana nanambarany ny fifironanan'ny andia-tafika mpilatsaka an-tsitrapo vaovao izay hiady any atsinanan'i Okraina ho an'ny mitonontena ho “Repoblika Entimbahoakan'i Donetsk.” “Hitaingina soavaly fotsy hiditra any amin'ny tanàndehibe rehetra izay efa nilaozantsika [ Rosiana] ny andia-tafika ” hoy izy.
Ao amin'ny lahatsary, izay navoakan'ny gazety Life.ru, pro-Kremlin mpanala baraka, miatrika ny fakan-tsary i Prilepin, mihazona taratasy iray misy ny sary famantarana ny fandriampahalemana natao kitoatoa. Avy eo nanambara moramora ity manaraka ity izy:
” Efa nanohana hatrany ny fandriampahalemana ny mpanoratra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Toa an'i Shakespeare, Shenderovich, Dante, Andrei Makarevich — Manohana ny fandriampahalemana ihany koa aho. Misaotra anareo rehetra.”
Niaraka tamin'ny endrika feno fahasorenana tampoka teo, nanontany ny mpaka sary izy aveo raha efa vita izany, alohan'ny nitodihany tany amin'ny fitaovam-piadiana mpikendry fiaramanidina eo ambonin'ny kamiao iray taoriany . “Andao amin'izay hiasa!” hoy izy nihiaka, ary nanao tifitra tamin'ilay fitaovam-piadiana midobodoboka imbetsaka tany amin'ny faravodilanitra .
Tamin'io andro io ihany, namoaka lahatsoratra tao amin'ny tranonkalam-baovao mpomba ny Kremlin REN-TV i Prilepin, izay nanaovany fandaharana resadresaka fanindroany. Tao amin'ity lahatsoratra ity, niezaka ny hanazava ny hevitr'ilay ” lahatsarim-pandriampahalemana” izy.
“Tsy fanomezana ny fandriamapahalemana ,” hoy i Prilepin nanoratra tamin'ny fomba feno misitery. “Asa ny fandriampahalemana. Rehefa tsy misy ny fandriampahalemana dia tsy maintsy miady ho amin'izany ianao. “
Nanamarika tamim-pahatokisana ihany koa izy fa miaraka aminy ny tantara momba io foto-kevitra io. “Mazava tanteraka fa i Lev Tolstoy, sy Pavel Katenin, Mikhail Lermontov, ary ny poety am-polony hafa no tena nirotsaka tamin'ny ‘adin'ny fandresena'” hoy i Prilepin nanazava, talohan'ny nanononany ny anaran'ny mpanoratra malaza hafa vitsivitsy, anisan'izany Pushkin, Baratinsky, Garshin , Batyushkov, Slutsky ary Lukonin.
“Manohana ny fandriampahalemana aho. Tsy fantatro izay tohananareo, ” hoy i Prilepin nilaza tamin'ny mpamaky. ” Ary tsy raharahako izany aho raha ny marina.”
Tokony ho herinandro taorian'izay, namoaka lahatsoratra iray hafa ho an'ny fahitalavitra fanaovana fampielezan-kevitra Rosiana RT ( “Russia Today” teo aloha) izy tamin'ity indray mitoraka ity, izay nilazany fa “tsy mikasika ny maha olona ny literatiora:,” ary nanazava izy fa mandao matetika ny fototry ny asany ao Donetsk mba hitady vola indray any Rosia sy hampiasa ny volany hividianana vatsy ho an'ny miaramilan'ny separatista, hoy izy.
Tamin'ny volana Martsa, nihaona tamin'ny rahalahiny am-panahy mpisorona mpiady tao amin'ny firenena ilay mpanoratra mpiady ao Rosia. Tamin'ny 9 Martsa , namoaka lahatsoratra fohy tao amin'ny Facebook izay namelabelatra ny fomba tokony hataon'ny firenena momba ireo “mpamadika” i Vsevolod Chaplin, mpitondrantenin'ny Eglizy Ortodoksa Rosiana teo aloha.
Nilaza i Chaplin fa mampiely ny rediredim-pahadalana indray ny “mpamadika sy ny mpamitaka” hoy izy raha namaly ny vaovao momba ny famonoana an'i Kim Jong-nam tany Malezia sy nampitaha ny tati-baovao tamin'ny nitranga tamin'ny taona 2006 mikasika ny namonoana an'i Alexander Litvinenko izay noheverina fa nataon'ny manampahefana Rosiana.
Nanome tolo-kevitra fanoharana miisa telo i Chaplin raha nilaza fa tokony esorina amin'ireo olon-dratsy ireo ny “fiadanan-tsaina”: manaisotra ny fampitsaharana ny fanamelohana ho faty ao Rosia, manangana “ekipa manokana mba hanatanteraka ny didim-pitsarana,” ary hanome alàlana ny “fidarohana balafomanga voatarika” any amin'ireo mpamadika.
Tsy nahagaga raha faly nahita ny pretra manohana mpamono olona tohanan'ny fanjakana ireo mpisera aterineto Rosiana. Nampahatsiahy tamim-pandrangitana an'i Chaplin momba ilay antsoin'ny Kristianisma hoe Didy Fahadimy (“Aza mamono olona”) ny Lentach, vondrom-piarahamonina mpanesoeso malaza.
Tsy vao sambany izao i Vsevolod Chaplin no nanohana ny famonoan'olona. Tamin'ny volana Aogositra, nandeha tany amin'ny fampielezam-peo Ekho Moskvy izy, ary nilaza fa indraindray ilaina ny “mamono ny fahavalo sasany.” Raha nanontaniana ny amin'ny zavatra tiany hambara izy, dia nanazava i Chaplin fa misy olona sasany ” azo sy tokony hovonoina tsy am-pisalasalana,” noho ny tombontsoan'ny fiarahamonina.